डा केसीको बयान सकियो, बुधबार सुनुवाइ हुने; डा. केसी वीर अस्पताल भर्ना | NepaleKhabar.com
डा केसीको बयान सकियो, बुधबार सुनुवाइ हुने; डा. केसी वीर अस्पताल भर्ना
काठमाडौं, पुस २५ गते । सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीसँग बयान लिने काम सम्पन्न भएपनि समय अभावका कारण आज सुनुवाइ हुन सकेन ।
डा. गोविन्द केसी वीर अस्पताल भर्ना
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि डा. गोविन्द केसीलार्इ वीर अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै पक्राउ परेका डा. केसीलाई मंगलबार बयान लिइएको थियो । विहानै अदालतमा उपस्थित गराइएको भएतापनि डा. केसीको बयान लिन शुरु गर्दा करिब २ बजेको थियो । बयान लिँदालिँदै अदालतको समय सकिएपछि सुनुवाइ भोलिका लागि तय भएको छ । अदालतले उनलार्इ प्रहरी हिरासतमै राख्न आदेश दिएको थियो ।
तर, सिंहदरबार बृत्त लैजाने क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि डा. केसीलाई वीर अस्पताल लगिएको छ । उनलाई ईनटी क्याबिनमा राखिएको छ ।
बयानका क्रममा उनले छाती फुलेको बताएका थिए । बयान ढिलो हुँदा उनको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै प्रहरीको एम्बुलेन्समा अदालत परिसरमा राखेर आराम गराइएको थियो ।